Momba anay | HEBEI XINTELI CO., LTD
Hebei Xinteli dia orinasa tanora manam-pahaizana manokana amin'ny fanafarana sy fanondranana entana, ary nalaina tamin'ny fanavaozana ny firafitry ny orinasam-barotra vahiny efa taloha. . Ny vokatra isan-karazany Hebei Xinteli dia harato tariby (harato hexagonal harato, harato tariby), fefy vy (fefy an-tsaha, fefy holland), vokatra zaridaina, vokatra vy ary vokatra vita amin'ny fitaovana. Mampiasa fitaovana avo lenta toy ny vy vy ambany isika. Afaka manome fitsaboana isan-karazany maro samihafa. Izy ireo dia nandrisika, nopetahana PVC, nandrisika tamin'ny PVC nopetahana. Ny entana dia hojerena tsara alohan'ny fanaterana, mba hanolorana kalitao tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay.
Ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny fambolena, fiarovana ny biby 、 zaridaina sns. Ny sehatry ny asa aman-draharaha koa dia manarona ny fanafarana sy fanondranana karazana vokatra sy teknika maro samihafa. Miditra amin'ny mpanondrana ambony any amin'ny faritanin'i Hebei izahay ho an'ny vokatra Metal & Garden.
Tao anatin'izay taona faramparany izay, Hebei Xinteli dia nifantoka tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra vaovao. Amin'ny alàlan'ny asa vaovao, ny vokatra vokarinay dia nitombo hatrany. Nohatanjahina be koa ny tamba-jotra. Ny vokatray ankehitriny dia amidy amin'ny tsena manerantany indrindra fa any Eropa 、 Etazonia any Amerika 、 Amerika Avaratra 、 Africa- Etc. Ny orinasa Hebei Xinteli amin'izao fotoana izao dia mivoatra amina dingana tsy miova.
Hebei Xinteli dia manana ekipa mpanangona nofinofy tsara, feno faniriana, fahavelomana ary famoronana. Mino izahay, miaraka amin'ny ezaky ny mpikambana rehetra, Hebei Xinteli dia azo antoka fa ho lasa orinasa lehibe amin'ny indostrian'ny varotra vahiny Hebei.
Hebei Xinteli dia manana ekipa mpanangona nofinofy tsara, feno faniriana, fahavelomana ary famoronana.